အားဖြင့် Posted: မေလ Anokuru ဇူလိုင်လ 25, 2012
မေးခွန်း: ကိုယ့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါးအကြာကဖြစ်ပွားခဲ့သောအရာကိုအနေဖြင့်အပြောင်းအလဲကိုသတိပြုမိဖို့စတင်ပါ၏, လူသိများတဲ့လက်လီစူပါမားကက်နိုင်ဂျီးရီးယားမှာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပွင့်အနာအခါ,. ဒါဟာလက်ရှိထိ​​ုကဲ့သို့သောကြီးမားလုပ်ငန်းများနောက်ထပ် set ကိုတိုင်းပြည်အတွင်းဖွင့်ပြသရန်စတင်နေကြသည်ပုံ. ယခုနိုင်ဂျီးရီးယားသည် preference ကိုပြကြီးများစူပါမားကက်များကဒီပြောင်းလဲမှု-of နှလုံးသည်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီအဘယျသို့ပေါ်မှာငါ့ကိုအလင်း ကျေးဇူးပြု. (အချို့ပင်ကြီးကျယ်သောအတိုင်းအတာအတွက်ဒါလုပ်နေတယ်၏ hinting နေကြတယ်), နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းလမ်းများ၏လက်ထောက်ညစ်ညမ်းမှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေလျှင် - Justin Akimbo
သင့်ရဲ့လေထုညစ်ညမ်းစေသောတွင် (နိုင်ဂျီးရီးယား) နည်းလမ်းများ, ပြောင်းပြန်ဒီကြီးမားတဲ့စူပါမားကက်၏ပြန်လာနှင့်အတူအမှုဖြစ်လိမ့်မည်ရိပ်မိအဘယ်သို့သောအ, ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏ပစ္စုပ္ပန်သက်ရောက်မှုကြောင့်မသွားနဲ့သူတို့ရဲ့လက်ထောက်လိုလားတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်စျေးကွက်-စီးပွားရေး Vogue ဖြစ်ခြင်း. သမိုင်းရှုထောင့်ကနေ, စူပါမားကက် (မကြာခဏဌာနဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များအဖြစ်ဤနေရာတွင်ရည်ညွှန်း) Kingsway တူ, Leventis, အတွင်းနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းကနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်လည်ပတ် UTC စတိုးဆိုင်များ 1960 နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် 1990 ခုနှစ်ခန့်သည်တိုင်အောင်မတက်. သူတို့ကလက်လီစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမှ Post-ကိုလိုနီခေတ်ချဉ်းကပ်မှု၏ထပ်မံကျရှိကြ၏, ဗြိတိန်နိုင်ငံကအရာရှိများရဲ့အကြွင်းအကျန်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသည်မှ (ဆဲအစိုးရဝန်ဆောင်မှုများနှင့်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများအတွက်အတွက်) နှင့်မကြာမီလွတ်လပ်ရေးနေ့အပြီးအနည်းငယ်နိုင်ဂျီးရီးယားလက်ရွေးစင်.
တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကွဲပြားခြားနားအလှညျ့ကိုနှုတျသကဲ့သို့ဤသူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပြီးတော့မွေးစားအဆိုပါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးချဉ်းကပ်မှု်၏မရနိုင်ပါ. တိုင်းပြည်အတွင်းကြမ်းတမ်းသော Operating ပတ်ဝန်းကျင်, 1980 အတွက်အဓိကအားဖြင့်ရေနွေးငွေ့ကိုစုဝေးစေရာ, သူတို့ရဲ့စစ်ဆင်ရေးအချို့ပိတ်ပစ်စတင်ရန်သူတို့ကိုအတင်းအကြပ်. အစောပိုင်း 1990 ခုနှစ်ခန့် Kingsway အရောင်းဆိုင်များ၏ပျောက်ဆုံးမှုနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှုခင်းအတွင်းအဓိကလက်လီစူပါမားကက်၏ပြီးပြည့်စုံပိတ်ပစ်၏အစအဦးမှတ်သား.
ဤရွေ့ကားစူပါမားကက်သူဌေးမျက်နှာသာမှ skewed ကြ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအယူအဆများကိုပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း၏အကြောင်းအရင်းသည်အဓိကအားဖြင့်တက်ခေါက် (ကိုလိုနီခေတ်စိတ်များ၏အငွေ့အသက်), နှင့်ရလဒ်အဖြစ်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ပျက်ကွက်. ပိုပြီးဒါ, ထိုအစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည့်အချိန်၌အစိုးရမူဝါဒမဆီးတားနိုင်. နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရ, နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် 1980 ခန့်တင်သွင်းအစားထိုးမဟာဗျူဟာကို လိုက်., ထုတ်လုပ်ထုတ်ကုန်များတင်သွင်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်တိုင်းပြည်အတွင်းစက်မှုဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအားပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည့်, နိုင်ငံခြားငွေကိုကယ်တင်, အလုပ်အကိုင်တွေဖန်တီး, နှင့်မှီခို၏ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကိုလျှော့ချ.
တစ်ဦးစူပ​​ါမားကတ်၏ပုံစံဖြစ်ပါတယ် ကုန်စုံဆိုင် (၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်းတဲ့စတိုးဆိုင် အစာ နှင့်အိမ်သူအိမ်သား ကုန်ပစ္စည်း), နှင့်သို့စီစဉ် ဌာနများ. သတ်မှတ်ချက်၏ဝေါဟာရများတွင်, စူပါမားကက်ပုံမှန်အားဖြင့်ပါဝင်သည် အသား, လတ်ဆတ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်, နွားနို့ရုံ, နှင့်ဖုတ်ကုန်ပစ္စည်းများဌာနများ, စည်သွပ်ဘူးများနှင့်ထုပ်ပိုးကုန်ပစ္စည်းများသည်အဖြစ်အိမ်သူအိမ်သားသန့်ရှင်းရေးနဲ့တူအမျိုးမျိုးသောအစားအစာမဟုတ်သောပစ္စည်းများသည် reserved ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအာကာသနှင့်အတူ, ဆေးဆိုင်ထုတ်ကုန်များနှင့် ချစ်. ကစား ထောက်ပံ့ရေး.
အများစုကစူပါမားကက်စ်ကိုမှန်မှန်ကိုလောင်နေသောအခြားအိမ်ထောင်စုထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုရောင်းချ, ထိုကဲ့သို့သောအရက်အဖြစ် (ဘယ်မှာခွင့်ပြု), ဆေးဝါး, နှင့် အဝတ်ကို. တချို့ကစတိုးဆိုင်အစားအစာမဟုတ်သောထုတ်ကုန်များတာပိုမိုကျယ်ပြန်အကွာအဝေးရောင်းချ. Customer များများသောအားဖြင့်သူတို့ရွေးချယ်ထားသောကုန်သွယ်တင်သည်ကိုအသုံးပြုစျေးဝယ် စျေးဝယ်လှည်း (စ trolleys သို့မဟုတ်နှစ်တောင်းကောက်သိမ်း) Self-service အတွက်ကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့မှအဓိကအားမှုကြောင့်, နှင့်မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်သည်အတိုင်းငွေပေးချေမှု ထွက်ခွာသည်.
Shoprite ၏ entry ကို, တောင်အာဖရိကမှာ၎င်း၏အမြစ်များနှင့်အတူကြီးမားတဲ့စူပါမားကတ်, တွင် 2007 နိုင်ဂျီးရီးယားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြင်ကွင်းသို့စူပါမားကက်၏ပြန်လာမှတ်သား. စီးပွားရေး Surulere နှင့် Alausa အတွက်ဆိုင်များတွင်ထူထောင်ခဲ့ကြကြောင်း Shoprite သည်ဒါကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲခဲ့, Lekki ၎င်း၏ကနဦးယူ-off အချက်မှအပိုဆောင်း (အားလုံးဂို့အတွက်). ဒါဟာတည်ထောင်ရန်ကတိပြုထားသည် 10 နိုင်ဂျီးရီးယားအနှံ့ပြန့်နှံ့ကုန်တိုက်ကြီးတွေ (မြျှောလငျ့စှာ, abuja ၏အားလုံးပါဝင်တဲ့, Enugu, ဆိပ်ကမ်း-Harcourt နှင့် Ilorin) မှုကြောင့်သင်တန်း.
Wal-Mart မှာ, အမေရိက၏အဓိကအနိမ့်စျေးကုန်သွယ်လက်လီစတိုးဆိုင်မကြာမီနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်နှစ်ဦးစတိုးဆိုင်များဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်. ဝင်ငွေအားဖြင့်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသောအခါဒါဟာအကြီးဆုံးကမ္ဘာ့လူထုကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ကျော်နှင့်အတူကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂလိကအလုပ်ရှင်2သန်းန်ထမ်းများနှင့်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးလက်လီအရောင်းဆိုင်. Wal-Mart မှာရှိပါတယ် 8,500 စတိုးဆိုင်များ 15 နိုင်ငံပေါင်း. Pepkor, ဝင်ငွေနည်းဝင်ငွေပစ်မှတ်ထားရာအခြားစူပါမားကက်အုပ်စု, မကုန်မီ၎င်း၏ပထမဆုံးနိုင်ဂျီးရီးယားစတိုးဆိုင်ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်နေကြောင်း 2012. ဒါဟာအကြောင်းကို setup ကိုရည်ရွယ်ထား 50 အများကြီးနောက်ပိုင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်ဆိုင်များတွင်.
တော်တော် Leventis ၏လက်ထက်ကာလ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သောအရာကိုမတူဘဲ, Kingsway နှင့် UTC စတိုးဆိုင်များ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်များအဓိကအားဖြင့်သူဌေးရည်ရွယ်ခဲ့ကြသည့်အခါ, နှင့်ဆိုင်များတွင်အဓိကအားဖြင့်တင်သွင်းပစ္စည်းများနှင့်အတူထားရှိလျှက်ထိန်းသိမ်းထားရှိခဲ့သည်, ယခုတိုင်းပြည်အတွင်းဖွင့်ခြင်းနှင့်ဆင်တူလုပ်ငန်းများရဲ့ဒီအသစ်များထားသည်မှာထင်ရှားလက်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းအကိုက်ညီဆုံးအရာဟာလုံးဝဆိုင်းငံ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာကြောင့်သွားအောင်မြင်လိမ့်မည်. သူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၏အဓိကလုပ်ငန်းထက်ပိုအပေါ် hinged ဖြစ်ပါတယ် 75% နိုင်ဂျီးရီးယားပေးသွင်းသူများနှင့်လယ်သမားများထံမှရင်းမြစ်ထားတဲ့ခံရ display ကိုအပေါ်ထုတ်ကုန်များ. ထို့အပြင်, သူတို့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏အလုပ်သမားနှင့်လေ့ကျင့်သည်နှစ်သက်တဲ့ပြ - ပတ်ပတ်လည်အများကြီးလိုအပ်နေအလုပ်အကိုင်အတွက်အဖြေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရင်းအမြစ်.
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဆွဲဆောင်ဆီသို့ဦးတည်လက်ရှိအစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီး၏အရှိန်အဟုန်ကြောင့်ပါးအဖြစ်, သစ်သီးများအထွက်နှုန်းခံရဖို့ဟန်. ဒီတရွေ့ရွေ့ခွဲခွာမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် Going, အဘယ်သူသည်ဤကဲ့သို့သော Carrefour ကဲ့သို့သောအခြားကြီးမားသောစူပါမားကက်ကပြောပါတယ်, Tesco, Sainsbury ရဲ့, Asda, Woolworths, Safeway, Marks & spencer မကြာမီနိုင်ဂျီးရီးယား၌မိမိတို့တံခါးများကိုဖွင့်လှစ်မည်မဟုတ်? ဤသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အာရုံစိုက်အာဖရိကသို့ဦးတည်ပြောင်းလဲသောအခါအချိန်လာသေး၏ (နီးပါးလူဦးရေသန်း၏စျေးကွက်နှင့်အတူ, ကြီးမားသောအရင်းအမြစ်များနှင့်လူငယ်တစ်လူဦးရေ၏), နှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားဗဟိုစင်မြင့် occupying. နိုင်ဂျီးရီးယားစျေးကွက်၏ဆွဲဆောင်မှုနိုင်ငံရဲ့အစာရှောင်ကြီးထွားလာလူလတ်တန်းစားအပေါ်သည်းခံခြင်းသည်ဟုသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ (N80 အကြားရရှိ, 000 နှင့် N100, 000 လစဉ်သို့မဟုတ်နှင့် ပတ်သက်. $6,000 – $7,500 တနှစ်လျှင်).
မလုံခြုံမှုများအရုပ်ဆိုးသောအဖြစ်အပျက်များ၏ကြားမှ, "Boko Haram" အားဖြင့် championed အဖြစ် (အကြင်အတောင်တော်ကျနော်မကြာမီညှလိမ့်မည်ယုံကြည်), နိုင်ဂျီးရီးယားဆဲထွန်းသစ်စစျေးကွက်တွေမှာစိတ်အားထက်သန်အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုဦးတည်ရာဖြစ်နေဆဲ. ကိုယ့်လွန်းနိုင်ဂျီးရီးယားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်ကိုပဌနာ, ကို 'တီးဝိုင်းလှည်း' 'ပူးပေါင်းဖို့နှင့်ဤအသစ်ပေါ်လာခြင်းထံမှအသီးအနှံကိုရိတ်ရရန်နေရာပေါ့.
စူပါမားကက်၏ကောင်းကျိုးများ, အောက်ပါလစျြလြူရှုမထားသင့်ဟူသောပါဝင်: လွယ်ကူသောဝယ်ယူများအတွက်အောင်စျေးနှုန်း tags များ; အတူတူအိမ်ခေါင်မိုးအောက်၌ရှိသမျှသောပစ္စည်းများဝယ်ယူဖြည့်များအတွက်ပြဌာန်းချက်; များသောအားဖြင့်လျှော့ချ margin တွေကနေနိမ့်ကျဈေးနှုန်းများမှာကိုပူဇျောခံထုတ်ကုန်; မကြာခဏသိုလှောင်၏ပုံမှန်အစည်းအဝေး offloading ကြောင့်လတ်ဆတ်သောထုတ်ကုန်များတတ်နိုင်; ရရှိနိုင်မြှင့်တင်ရေးကမ်းလှမ်းမှုလုပ်; စကေး​​၏စီးပွားရေးသည်ထံမှနိမ့်သောကုန်သွယ်စရိတ်မတတ်နိုင်; ကုန်စည်ပိုကောင်းအမျိုးမျိုးကိုပူဇော်; ဖောက်သည်တိုင်ကြားသည့်အခါမကြာခဏပစ္စည်းများကိုအစားထိုးရန်သို့ပြန်လာ, စသည်တို့ကို.
ထိုအစူပါမားကက်၏ရောက်လာခြင်းနှင့်အတူ, ငါသည်အလျင်အမြန်စီရင်နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက် "စူပါမားကက်ယဉ်ကျေးမှုများ" ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရိပ်မိ - လက်ရှိပြံ့နှံ့ခေါင်းပုံဖြတ် haggle စျေးနှုန်း system ထဲကနေတစ်ဦးတိမ်းယိမ်းခြင်း.
မှတ်ချက်ပေးရန်ကိုပထမဦးဆုံးဖြစ် အပေါ် "စူပါမားကက်၏သို့ပြန်သွားသည်"